के सोशल मिडिया निःशुल्क स्पीच र फ्रि प्रेस अन्तर्गत सुरक्षित छ? | Martech Zone
के सोशल मिडिया निःशुल्क स्पीच र फ्रि प्रेस अन्तर्गत सुरक्षित छ?
शुक्रवार, सेप्टेम्बर 13, 2013 शुक्रवार, सेप्टेम्बर 13, 2013 Douglas Karr
यो सब भन्दा डरलाग्दो घटनाहरू हुन सक्छ जुन यस देशको स्वतन्त्र बोली र स्वतन्त्र प्रेसलाई धम्की दिन्छ। सिनेटले एक पारित गरेको छ मिडिया शिल्ड कानून त्यो पत्रकारिता परिभाषित हो र जहाँ पत्रकारहरूको मात्र संरक्षित वर्ग संलग्न छ वैध समाचार भेला गतिविधिहरु.
१०,००० फिट दृश्यबाट, बिल एक उत्तम विचार जस्तो देखिन्छ। एलए टाइम्सले यसलाई "पत्रकारहरूलाई सुरक्षा दिने बिल" पनि भनेको छ। समस्या अन्तर्निहित भाषा हो जसले सरकारलाई के परिभाषित गर्न अनुमति दिन्छ पत्रकार हो, जो एक पत्रकार हो, वा के हो वैध समाचार भेला छ।
यहाँ छ मेरो लिनुहोस्। नागरिक पत्रकारिताले हाम्रो सरकारमा अपूरणीय दबाब लागू गर्दैछ जुन धेरै टन मुद्दाहरूलाई उजागर गर्दैछ। अवश्य पनि दुई पक्षपक्षीय समर्थन को परिभाषित गर्न को लागी को हो वा को पत्रकारिता हो को दायरा को संकुचित। जो कोहीले पनि सरकारी समस्याहरु उजागर गर्ने धम्की दिन्छ भने हाम्रो संविधान अन्तर्गत प्रेसको संरक्षण गुमाउन सक्छ। सबै राजनीतिज्ञहरूले मनपराउँनेछन्… यसको मतलब उनीहरूले असहमति जनाउनेहरूलाई धम्काउन र डराउन सरकारी बजार लागू गर्न सक्दछन्।
चाहे तपाइँ सहमत हुनुहुन्छ एडवर्ड स्नोडन वा होईन, उसले जारी गरेको सूचनाले जनतालाई जानकारी गरायो र एनएसएले हामीलाई जासुसी गरिरहेको कार्यक्रमहरूको आक्रोश निम्त्यायो। यस विधेयकले स्नोडेनले गरेको कानुनी अधिकारलाई असर गर्दैन। डरलाग्दो कुरा यो हो कि यसले अमेरिकी पत्रकार भएको भए कतै यो विमोचन गरेको पत्रकारलाई वैधानिक वा नराम्रो असर पार्न सक्छ। वर्गीकृत सामग्री जारी गर्दै थियो वैध समाचार भेला?
१ 1972 1976२ र १ XNUMX XNUMX बीचमा, बब वुडवर्ड र कार्ल बर्नस्टेन अमेरिकाका दुई प्रख्यात पत्रकारहरूको रूपमा देखा परेका थिए र उनी सँधै अमेरिकी राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो कथा, वाटरगेट तोड्ने पत्रकारका रूपमा चिनिन थाले। उनीहरूलाई प्रदान गरिएको धेरैजसो जानकारी ह्वाइट हाउस भित्र एक जानकारीकर्ता मार्फत पूरा भएको थियो। त्यो थियो वैध समाचार भेला?
सायद रिपब्लिकनले सत्तामा हुन सक्छ कि MSNBC वैध छैन। सायद सत्तामा रहेका डेमोक्र्याटले फक्स न्यूज वैध नभएको बताउन सक्दछन्। के एक पत्रकार एक विशाल सरकारी घोटाला को माध्यम को उजागर वैध समाचार भेला भन्दा कम? के उसलाई जेल पठाउन सकिन्छ र घोटाला गाड्न सकिन्छ? यी केवल पारम्परिक मिडिया भित्रका समस्याहरू हुन्। यो खराब हुँदै जान्छ जब तपाईं इन्टरनेटको बारेमा सोच्नुहुन्छ र विकीमा लेख लेख्दा सुरक्षित गरिएको छ (तपाईंलाई ब्ल्गर वा पत्रकार वर्गीकृत गर्न सकिदैन)।
एक विषयको विरोध वा समर्थन गर्न जब तपाईं फेसबुक पृष्ठ सुरू गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ। तपाईले जानकारीको इन्टरनेट क्युरेट गर्न धेरै समय खर्च गर्नुभयो, यसलाई तपाईको फेसबुक पेजमा सेयर गर्नुभयो, एक दर्शक बढ्दै र समुदाय निर्माण गर्नुभयो। के तपाई पत्रकार हुनुहुन्छ? के तपाईको फेसबुक पेज सुरक्षित छ? के तपाईंले कानूनी रूपमा साझा गर्नुभएको जानकारी भेला गर्नुभयो? वा ... के तपाईं विपक्षमा मुद्दा हाल्न सक्नुहुन्छ, समुदाय बन्द छ, र लक पनि हुन सक्छ किनकि तपाईं सरकारको अधीनमा छैन। परिभाषा.
सामाजिक मिडिया र डिजिटल वेबको साथ, लगभग प्रत्येक व्यक्ति भाग लिइरहेको छ र समाचार साझा गर्दैछ। हामी सबै सुरक्षित हुनुपर्छ।
संविधान लेख्दा पछाडि सडकमा कुनै पनि औसत व्यक्ति जो printingण लिन वा प्रिन्टि press प्रेस लिन सक्थेaपत्रकार। यदि तपाईं पछाडि जानुहुन्छ र केहि एकल पृष्ठ कागजातहरू समीक्षा गर्नुहोस् जुन पछि प्रिन्ट गरिएको थियो, तिनीहरू क्रूर थिए। राजनीतिज्ञहरूलाई उनीहरूको आका .्क्षालाई दफन गर्नका लागि जनतासामु तिनीहरूको गलत अर्थ लगाउने पूर्ण झूटले भरिएको थियो। पत्रकार बन्न डिग्रीको आवश्यक पर्दैन… तपाईंले हिज्जे वा उचित व्याकरण पनि प्रयोग गर्नुपर्दैन! दशकौ पछि समाचार स organizations्गठनहरू देखा पर्न सकेनन् जब अखबारहरूले साना सर्कलहरू खरीद गर्न शुरू गरे। यसले आज हामीसँग रहेको न्यूज मिडिया मुगललाई निम्त्यायो।
पहिलो पत्रकारहरू शव्दहरू बाहिर निकाल्ने धेरै नागरिक थिए। त्यहाँ शून्य थियो वैधता कसले उनीहरूलाई लक्षित गरे, कसरी उनीहरूले सूचना प्राप्त गरे, वा उनीहरू कहाँ प्रकाशित गरे। र अझै पनि ... हाम्रो देशका नेताहरू ... जो प्रायः ती आक्रमणहरू हुन्थे ... स्वतन्त्र बोली र पत्रकारिताको अधिकारको रक्षा गर्न रोज्दछन्। तिनीहरूले जानाजानी प्रेस के हो, कसरी समाचार जम्मा गरियो वा कसको द्वारा परिभाषित नगरेको हो।
म पूर्ण रूपमा सहमत छु म्याट ड्रज यसमा, को हो ड्रज रिपोर्ट सायद यस विधेयक भित्र सुरक्षित हुँदैन। यो डरलाग्दो बिल हो जुन फासीवादमा सीमान्त हुन्छ, यदि यसको लागि ढोका खोलिएन भने।
टैग: स्वतन्त्र बोलीपत्रकारितावैध समाचार भेलासिनेट
iPerधारणा: ग्राहक प्लेटफार्म को आवाज
Bislr: बुद्धिमान मार्केटिंग OS
सेप्टेम्बर 13, 2013 मा 11: 23 AM
डग - केवल टाउको माथि, मलाई मेरो बफर विस्तार प्रयोग गर्दा समस्या भइरहेको थियो (यसले युआरएल फेला पारेन) र मैले तपाईको सेयरबारमा Google+ प्रयोग गर्न सक्दिन किनकि यो पृष्ठ "तल" थियो र म स्क्रोल गर्न सक्दिन। । फ्लेयर फंकी भइरहेको छ।
सेप्टेम्बर 14, 2013 मा 11: 18 AM
साझेदारीको लागि धन्यबाद .. मैले साँच्चिकै राम्रो पढेको थिएँ ..